Football Khabar » कोपा अमेरिका फुटबल कसरी लाइभ हेर्ने ?
कोपा अमेरिका फुटबल कसरी लाइभ हेर्ने ?
४६औं संस्करणको कोपा अमेरिका फुटबल नेपाली समयअनुसार भोलि (शनिबार) बिहानबाट ब्राजिलमा सुरु हुँदैछ । कूल १२ देश सहभागी प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपाली समयअनुसार बिहान ६ः१५ बजेबाट सुरु हुनेछ । उद्घाटन खेलमा आयोजक ब्राजिल आफ्नो भूमिमा बोलिभियासँग खेल्दैछ ।
टिभी-च्यानलमा लाइभ छैन !
विगत वर्षहरूमा भारतको ब्रोडकास्टिङ कम्पनीले कोपाको खरिद अधिकार किनेर प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आएकोमा यसपटक उसले प्रशारण अधिकार किनेको छैन । जसका कारण भारतलगायत सब–कन्टिनेन्ट देशहरूमा यसपटक कोपा टिभी–च्यानलनमा प्रत्यक्ष प्रशारण नहुने भएको छ ।
यसअघि सोनी नेटवर्कले प्रतियोगिता लाइभ दिने भनिए पनि उसले अन्तिम समयसम्म प्रशारण अधिकार खरिद गर्न नसक्दा सो क्षेत्रका फुटबल समर्थक तथा दर्शकहरूले यसपटक टिभीको पर्दामा कोपा अमेरिका हेर्न नपाउने भएका छन् ।
टिभी–च्यानलमा लाइभ नआउने भएपछि भारतलगायत सब–कन्टिनेन्ट देशका दर्शकहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट खेल लाइभ हेर्नुपर्ने भएको छ । इन्टरनेटबाट विभिन्न वेबसाइटहरू लगिन गरी लाइभ हेर्न सकिन्छ । त्यस्ता कतिपय साइटहरू सबै देशमा नचल्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा ‘free VPN services’ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, खेल लाइभ दिने थुप्रै मोबाइल एपहरू छन् । स्मार्ट मोइबाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘प्ले स्टोर’बाट विभिन्न Football Live एपहरू डाउनलोड गरेर पनि लाइभ हेर्न सकिन्छ । त्यस्ता कतिपय एपहरू सीमित देशमा मात्रै चल्ने हुँदा अन्य एपहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सन्जाल फेसबुकबाट पनि कतिपय पेजहरूले लाइभ दिइरहेका हुनछन् । तर, फेसबुकबाट दिइने प्रशारण अवैध मानिने हुँदा ‘कपी राइट’का कारण त्यस्ता लाइभ लिंकहरू जतिबेलै बन्द हुन सक्छन् । त्यस्तो बेला अन्य लिंकहरू खोजी गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:४४